စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၄၄ ) ( လက်ပန်တောင်း – ၂ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Different » စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၄၄ ) ( လက်ပန်တောင်း – ၂ )
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၄၄ ) ( လက်ပန်တောင်း – ၂ )
Posted by Foreign Resident on Dec 4, 2012 in Think Different | 43 comments
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၄၄ )
( လက်ပန်တောင်း – ၂ )
ကိစ္စ နှင့်ပါတ်သက်ပြီး ၊
၂၃ နိုဝင်ဘာ တုန်းက
ဗိုလ်ချုပ် ဝေလွင် ရဲ့
ရှင်းလင်းချက် ကို ၊
မြဝတီ က မနေ့က
( ၃ ၊ ဒီဇင်ဘာ ) မှ
အရင် ဖတ်ကြည့်ကြပါအုန်း ။
ကျွန်တော်တို့ဒေသန္တရ ပေါက်ဈေး နှစ်သိန်း ကနေ လေးသိန်း ဆိုတဲ့ အစား ၊
ငါးသိန်း ၊ ငါးသိန်းခွဲ အထိ ၊ ပေးလျော် ခဲ့ပါတယ်။
ဒါ အေ တိုက် ဖြစ်တဲ့အတွက် တန်ဖိုးအားဖြင့် ၁၃၄ သိန်း ကုန်ကျ ပါတယ်။
ဘီ တိုက်က ကျွန်တော်တို့ ၇၂ သိန်း ကျွန်တော်တို့ ကုန်ကျပါတယ်။
စီ တိုက် ကတော့ ၅၂ သိန်း ကျွန်တော်တို့ ကုန်ကျပါတယ်။
ဒီ တိုက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ ၃၈ သိန်း ကုန်ပါတယ်၊
အေ တိုက်ဖြစ်တဲ့ အိမ်ကို ဆယ်သိန်း ပြုပြင် စရိတ်ယူ ။
ဘီ တိုက် ဖြစ်တဲ့ အိမ်ကို ပြုပြင်စရိတ် ရှစ်သိန်းယူ ။
စီ တိုက် ဖြစ်တဲ့အိမ်ကို ပြုပြင် စရိတ် ခြောက်သိန်းယူ ။
ဒီ တိုက် ဖြစ်တဲ့ အိမ်ကို ပြုပြင်စရိတ် လေးသိန်း ၊
ကျွန်တော်တို့ ပေးကြောင်း တင်ပြပါတယ် ။
ကျွန်တော်တို့ အိမ်သုံး လျှပ်စစ် မီတာ တစ်လုံးကို ရှစ်သောင်းခွဲ လောက် ကျွန်တော်တို့ ကျပါတယ်။
ဒါကိုလဲ အခမဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဆောင်ရွက် ပေးပါတယ်။
ဒါ ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက် ထားရှိမှု ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ ၁၆ ကုတင်ဆံ့ ဖြစ်ပါတယ် ။
ကုသမှု တောက်လျှောက် ဆောင်ရွက် ပေးပါကြောင်း တင်ပြလိုပါတယ် ။
ဒါလေး ကတော့ ကျွန်တော်တို့ စာသင်ကျောင်း တည်ဆောက် ပေးမှု ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါက ကျွန်တော်တို့ ဆက်သွယ်ရေးရုံး၊ မီးသတ်စခန်း တည်ဆောက်ပေးမှုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဘယ်ဘက် အစွန်က ISO ၁၄၀၀၁ ဆိုတာဟာ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်
ထိန်းသိမ်းမှု စီမံခန့်ခွဲခြင်း ဆိုင်ရာ ရရှိတဲ့ လက်မှတ် ဖြစ်ပါတယ် ။
အလယ်က ဟာက ကျွန်တော်တို့ ထုတ်လုပ်မှု အရည်အသွေး Productionနဲ့
ပတ်သက်တဲ့ အရည် အသွေး စီမံခန့်ခွဲမှု ဆိုင်ရာ ရရှိထားတဲ့ လက်မှတ် ဖြစ်ပါတယ်။
( ISO 9000 ကိုပြောတာ ဖြစ်ပုံ ရတယ် )
ညာဘက် ကဟာက လုပ်ငန်း ခွင်ဘေး အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနဲ့ ကျန်းမာရေး လုံခြုံမှုနဲ့
ပတ်သက်လို့ စီမံခန့် ခွဲမှုနဲ့ ပတ် သက်ပြီး ရတဲ့ဟာ ဖြစ်ပါတယ်။
စင်ကာပူ နိုင်ငံက SGS ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာ့ အသိအမှတ်ပြုတဲ့ ကုမ္ပဏီက နေမှ
နားလည်မှု နဲ့လည်း လုပ်လို့ မရဘူး ပိုက်ဆံပေးပြီး တော့လည်း ဒီ Certificate ကို လုပ်လို့ မရဘူး ။
အမျိုးသား လွှတ်တော်က သယံဇာတ ကော်မတီ လဲလာ စစ်ဆေးခဲ့ပြီးပြီ ။
လွတ်လပ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်က အတွင်းရေးမှူး ဦးစီးတဲ့ အဖွဲ့တွေလဲ စစ်ဆေးပြီးပြီ ။
မြေကြီးတွေ ပုံထားတဲ့ နေရာတွေမှာ ဆိုရင်လည်းပဲ ၊
ရွာသူရွာသား တွေက လာပြီးတော့ တစ်ခါတည်း အိတ်တွေနဲ့ထည့် ၊
ထည့်ပြီးရင် အောက်က တောင်ကုန်း ထဲကို ပစ်ချပြီးရင် အတင်းထွက်ပြေး ၊
ဒါတွေနဲ့ ချက်လုပ် နေတဲ့ အနေအထား တွေလည်း ဆောင်ရွက် နေပါတယ် ။
ဒီညာဘက်က ပြထားတာက ကျေးရွာတွေက နေပြီးမှ ဒေသန္တရ နည်းတွေ နဲ့
ကိုယ့် အစီ အစဉ်နဲ့ ကိုယ်ထုတ်ပြီး ဒါ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ environmental impact တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ အနေအထားမှာ
ဒီ ကျေးရွာတွေရဲ့ အစီအစဉ်တွေနဲ့ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အနေ အထားတွေ ကလည်း
အင်မတန်ပဲ ကြောက်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။
လက်ပံတောင်း တောင်မှာလည်း အစိုးရက ၁၆.၈၀ ရာခိုင် နှုန်း၊
မြန်မာ့ စီးပွားရေး ဦးပိုင် လီမီတက်က ၁၃.၈၇ ရာခိုင်နှုန်း ၊
မြန်မာ့ ယန်စီ ကုမ္ပဏီက ၁၃.၃၃ ရာခိုင်နှုန်း နဲ့
ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်က ၅၆ ရာခိုင်နှုန်း ကျွန်တော်တို့ သတ်မှတ် ထားပါတယ်။
ကျန်တဲ့ ကြေးနီထုတ်တဲ့ နိုင်ငံတွေကို နှိုင်းယှဉ်ပြီးတဲ့ အခါမှာ ၊
ဒီ cost of production ကို ကျွန်တော်တို့ စီမံကိန်းအတွက် ၊
တစ်တန်ကို ဒေါ်လာ ၃၇၀၀ ထက် ကျော်လွန်သုံးစွဲခြင်း မရှိရဘူးဆိုတဲ့ ၊
ကန့်သတ်ချက်ကိုလဲ စာချုပ်ထဲမှာ ထည့်သွင်းပြီး ဆောင်ရွက်ထားပါတယ် ။
မြန်မာ့ စီးပွားရေး ဦးပိုင် လီမီတက် ဆိုတာ တပ်မတော် ရဲ့ စစ်မှုထမ်းတွေ ၊
နောက်တစ်ချက်က စွန့်လွှတ်သွား ခဲ့ရတဲ့ အသက်တွေကို စွန့်လွှတ်သွားတဲ့ မိသားစုတွေ ၊
ဒါ တွေရဲ့ အစုရှယ်ယာ တွေကို ကျွန်တော် တို့က စုစည်းပြီးတော့ ၊
ဒီလုပ်ငန်း တွေကို ကျွန်တော်တို့ လုပ်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နိုင်ငံတော် ဟာလည်း ဖွံ့ဖြိုးဖို့ အတွက်ကို တည်ဆောက်နေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ၊
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒီ အာမခံချက် ၊ တပ်မတော်သား တွေရဲ့ ပင်စင် သွားပြီးတဲ့ ၊
နောက်ပိုင်း ကျဆုံးသွားတဲ့ စစ်သည်တွေရဲ့ အပေါ်မှာ အာမခံချက် ၊
တိုးမြှင့်ပြီး တောင်းဖို့ ကျွန်တော်တို့ အခက် အခဲရှိတယ် ။
ဒါဟာ မြန်မာ့ စီးပွားရေး ဦးပိုင် လီမီတက် အနေနဲ့
ကိုယ့်ဟာနဲ့ ကိုယ့်အစီအစဉ် ကိုယ် ရုန်းကန် ပြီးတော့
တပ်တွေရဲ့ သက်သာ ချောင်ချိရေး ကိစ္စတွေကို ဆောင်ရွက်ပေး နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး နယ်ပယ်မှာ ထာဝရ မိတ်ဆွေ ဆိုတာလည်း မရှိဘူး။
ထာဝရ ရန်သူ ဆိုတာလည်း မရှိဘူး။
သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံရဲ့ အကျိုး စီးပွားပဲ ရှိတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ပြောပါတယ် ။
ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်တော်တင်ပြ လိုတာကတော့ တရုတ်နိုင်ငံ အကျိုးစီးပွား အတွက်လ ည်း မဟုတ်ပါဘူး။
အမေရိကန် နိုင်ငံ ရဲ့ အကျိုးစီးပွား အတွက်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံတော် ရဲ့ အကျိုးစီးပွားနဲ့
ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူလူထုရဲ့ အကျိုးစီးပွား အတွက် ကိုပဲ ၊
ကျွန်တော် ဦးတည်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တင်ပြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ ကြားထဲမှာ ကျွန်တော် တို့ဆောင်ရွက် နေတာ တရုတ်နိုင်ငံ ကုမ္ပဏီနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံဟာ ၁၃၈၄ မိုင် အိမ်နီးချင်း နယ်နိမိတ် ရှိပါတယ်။
ဒီဟာ ကို ကျွန်တော်တို့ ပျက်ပြယ်သွားရင် ချစ်ကြည် ရင်း နှီးမှုတွေ ကျွန်တော်တို့ ပျက်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဝန်ထမ်းတွေ ရေဖြတ်ထား၊ အစာဖြတ်ထား။
အသွားအလာတွေ လုပ်လို့ မရအောင်ဆောင် ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။
အဲတော့ လောလောဆယ် အဲဒီမှာလဲ ကျွန်တော်တို့ ၊
နိုဝင်ဘာလ ၁၈ရက်နေ့က စပြီးတော့ ဘာလုပ်ငန်းမှ လုပ်လို့မရပါဘူး ။
ဒီစီမံကိန်း တွေက ဒီလိုတွေ ရပ်တန့် သွားလို့ ရှိရင် ၊
တစ်လ တစ်လကို ဒေါ်လာနှစ်သန်း ကျွန်တော်တို့ ဆုံးရှုံးပါတယ် ။
နောက်တစ်ချက်က မီဒီယာတွေရဲ့ တိုက်ကွက် ၊
ဒီဟာက ဆည်တဲရွာက အမျိုးသမီး ဖြစ်ပါတယ် ၊
အမှန် သူငိုချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မငိုချင်တဲ့ ဟာကို ငိုအောင်လုပ် တဲ့ဟာကို ၊
နောက်က အမျိုးသမီးက နေပြီးတော့မှ ရယ်ပြီးတော့ အရိုက်ခံ နေတဲ့ပုံကို ၊
ဒါ ကျွန်တော်တို့ ဆန္ဒပြတဲ့ အထဲက နေပြီးတော့ ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။
လုံချည်အပြာနဲ့ အမျိုးသမီး ဆိုရင် သူငိုတာ ငိုဟန် မကျ လို့ ၊
သူ့ဟာသူ ဘေးမှာ ရယ်နေတဲ့ ပုံလေး ဖြစ်ပါ တယ် ။
ဒီပုံကို ဆိုရင်လဲ ပြောင်းရွှေ့မှု နစ်နာကြေးကို ရယ်ရယ် မောမောနဲ့ပဲ ပြောနေ တာဖြစ် ပါတယ်။
သို့သော်လည်းပဲ ဒီနေ့ ဆန္ဒပြနေတဲ့ အချိန်မှာလဲ ဒီလူတွေပဲ ဆန္ဒပြနေတဲ့ အနေ အထား ဖြစ်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့ တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၆၀ လောက်ကတော့ လယ်တီ ဆရာတော် ဘုရားကြီးဟာ
ဝါးကျောင်းလေးနဲ့ တရား အားထုတ်ရင်းနဲ့ တစ်ဝါတော့ ဝါဆို သွားဖူးတယ်လို့ သိပါတယ် ။
လယ်တီ ဆရာတော် ဘုရားကြီးရဲ့ အငွေ့အသက်တွေ ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး လေးတွေနဲ့ ၊
ခုနက မငိုချင်ပဲနဲ့ ငိုသလို enlarge လုပ်တဲ့ဟာ တွေမှာလဲ ၊
မီဒီယာ တိုက်ကွက် တွေမှာလဲ ခံစားနေရတဲ့ အနေ အထား မျိုးတွေ တင်ပြလိုပါတယ်။
Un – Quote
တော်တော် သောက်သုံး မကျတဲ့ ကောင်တွေ ၊
စောစောစီးစီး သတင်းစာထဲ ထည့်လိုက်ရင် ၊ ပြည်သူက လက်ခံနိုင်လောက်တယ် ။
မလှုပ် မရှုပ် မပြုတ် လုပ်နေပြီး ၊ တင်ဖို့ နောက်ကျနေတယ် ။
ညံ့တယ် ဆိုတာ အဲဒါကိုပြောတာ ။
အမေစု က သပိတ် စခန်းကို မသွားဘူး ၊ စာချုပ်ကို လိုက်နာရမယ် ၊ ပြောကတည်းက ၊
ဖြစ်ပြီးတော့လည်း ၊ ဦးသိန်းစိန်ကြီး က ခပ်မာမာပဲ နေကတည်းက ၊
( ဝမ်းနည်းကြောင်းလေးတောင် မပြောဘူး ၊ ခပ်တည်တည်ပဲ ဘရူနိုင်း ကိုထွက်သွားပြီ )
ရဲတွေကလည်း သေချာ ဝန်ချ မတောင်းပန်ပဲ ၊ ရှင်းရုံပဲ လုပ်သွားကတည်းက ၊
၁ ။ ဒီကိစ္စ အစိုးရ နှင့် ဦးပိုင် ပက်ပက်စက်စက် မမှားလောက်ဖူး ဆိုတာ မှန်းလို့ ရပါတယ် ။
၂ ။ စစ်တပ်က ဒီကိစ္စမှာ ပြတ်ပြတ် သားသား အစိုးရနောက်မှာ ရှိနေမယ် ဆိုတာ မှန်းလို့ရတယ် ။
ဒါပေမယ့် အခုလို အပြည့် အစုံ စောစောစီးစီး ရှင်းပြထားရင် ၊ ကြီးတဲ့ အမှု ငယ်သွားမှာပေါ့ ၊
အခုတော့ ငယ်တဲ့အမှုက သောက်ကြိုးနဲ သွားပြီ ။ အခုမှ လိုက်ရှင်းပေတော့ပဲ ။
အချုပ် အနေနှင့် ပြောရရင် ။
နိုင်ငံတော် နှင့် တကယ်လုပ်တဲ့ ဝမ်ပေါင် အကြားမှာ ၊
မဆီမဆိုင် ဦးပိုင်က အမြတ်ဝင်ယူတာကတော့ တမျိုးကြီးပဲ ။
နောက်ပြီးတော့ ကြားက ( ဦးတေဇ ) ပွဲခ ဝင်ယူတာလဲ များသလိုပဲ ။
ထားပါ ဒါတွေက ဘယ်ခေတ်မဆို ရှိနေတာပါပဲ ။
စစ်သားလေးတွေဆီကို ဒီ ပိုက်ဆံ ရောက်မယ်ဆို ကျေနပ်ပါတယ် ။
နိုင်ငံတကာ Firm SGS ကထုတ်ပေးတဲ့ ၊
ISO – 14001 နှင့် ISO – 9000 လက်မှတ် ရတယ်ဆိုကတည်းက ၊
သဘာဝ ပါတ်ဝန်းကျင် နှင့် ပါတ်သက်တဲ့ နိုင်ငံတကာ စံ ကို ၊
လိုက်နာနေတယ် ဆိုတာ လက်ခံပါတယ် ။
ဒီ အချက်အလက်ကို မြဝတီ နှင့် အစိုးရ မီဒီယာက တော်တော် နောက်ကျမှ တင်တဲ့အတွက် ၊
မြဝတီ နှင့် အစိုးရ မီဒီယာ ဟာ ညံ့နေ / လိုနေ သေးကြောင်း ထင်ရှားပါတယ် ။
အပြင်ဖက်က အရပ်ဖက် မီဒီယာတွေဟာ ၊ ဒီ ရှင်းလင်းချက်ကို ၊
ရပါလျက် ၊ သိရှိပါလျက် ၊ တင်ခွင့်ရှိပါလျက် နှင့် ၊ ပြည်သူကို မတင်ပြခဲ့တာဆိုရင် ၊
အပြင်ဖက်က အရပ်ဖက် မီဒီယာတွေ ဟာ ဘက်လိုက်ခဲ့တယ်လို့ ထင်မြင်ပါတယ် ။
ဗိုလ်ချုပ် ဝေလွင် ပြောသွားတဲ့ ၊
ရွာသူလေးကို အတုအယောင် ငိုခိုင်းပြီး သတင်းလုပ်စားတဲ့ မီဒီယာသမားတွေကို ၊
မီဒီယာသမား အချင်းချင်းကပဲ ဖေါ်ထုတ် ရှုံ့ချ ပေးရပါမယ် ။
နို့မို့ရင် မြန်မာ မီဒီယာ တွေအပေါ် အယုံ အကြည် ရှိမှု ပျောက်ဆုံး သွားပါမယ် ။
ဆန္ဒပြတာတွေကို ဖြိုခွင်းရတော့မယ် ဆိုတာ လက်ခံပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ၊ ဖြိုခွင်းတဲ့ အချိန် ရွေးချယ်မှု နှင့် ဖြိုခွင်းတဲ့ နည်းလမ်း ရွေးချယ်မှု မှာတော့ ၊
ထပ် ရှင်းပြစရာတွေ ရှိပါအုန်းမယ် ။
အောက်ခြေ အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ အတွေ့အကြုံ နှင့် နည်းပညာ အားနည်းမှုကြောင့် ၊
လိုအပ်တာထက် ပိုပြီး ( လိုအပ်တာထက် ပိုပြီး ) ထိခိုက် ဒါဏ်ရာရသွားတဲ့ သူတွေကို တောင်းပန်ပြီး ၊
ကျန်းမာရေး စားရိတ်ကို သင့်တင့်တဲ့အထိ ၊ တာဝန်ယူပေးသင့်ပါတယ် ။
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အနေနှင့်လည်း ၊
ငါတို့ မမှားဘူး ၊ စစ်တပ် ကလဲ ပြတ်ပြတ်သားသား ထောက်ခံတယ် ၊
နိုင်ငံတကာ ကလည်း အပြစ် မတင်ဘူး ၊
အမေစု လည်း ပြင်းပြင်း ထန်ထန် မကန့်ကွက်ဘူး ၊ ဆိုပြီး ၊
ခပ်မာမာ နေရင်တော့ ၊ လူကြိုက် နည်းပါလိမ့်မယ် ။
မှားယွင်းကြောင်း ပြောရမယ်လို့ မတိုက်တွန်းလိုပေမယ့် ၊
ဥပဒေ နှင့် အညီ လုပ်ခဲ့သော်ငြားလည်း ၊ မတော်တဆ သဘော နှင့် ၊
လိုအပ်တာထက်ပိုပြီး ထိခိုက် ဒါဏ်ရာရသွားတာတွေကို ၊
ဝမ်းနည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြောင်း လောက်တော့ ၊
တရားဝင် ပြောသင့်ပါတယ် ။
အဘ ကတော့ ၊ အခုထက်ထိ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် ရဲ့ ၊
ဒီမိုကရေစီကို ဦးတည် လျှောက်လှမ်းနေတဲ့ ခြေလှမ်းတွေကို ၊ ထောက်ခံပါတယ် ။
ဒီ့ထက်လည်း ၊ မြန်မြန်သွားချင်လို့ မရဘူး / မသင့်ဘူး ဆိုတာကို ၊ နားလည် လက်ခံပါတယ် ။
ဒီစာကို ဖေ့စ်ဘုတ်မှာလည်း.. တွေ့ပါတယ်..
ဝေဖန်ရေးဆိုတဲ့ ကိစ္စ …
နိုင်ငံရေးမှာ ယုံချင်တာကို ယုံဖို့အခွင့်ရှိပါတယ် … ယုံကြည်သလို လုပ်ကြ ပြောကြ ယုံကြည်ကြ ရှိပါတယ် … ရှိခဲ့တယ် ဒါသမိုင်းပဲ … ဒီတော့ နိုင်ငံရေးမှာ ယုံချင်သူကလဲ သူယုံချင်တာ ယုံမှာဖြစ်သလို ဝေဖန်လိုသူကလဲ သူ့မှာ ဝေဖန်ပိုင်ခွင့်ရှိလို့ ဝေဖန်နိုင်ခွင့်လည်း ရှိပါတယ် … ဒါသဘာဝပဲ … ဒီနေ့ ၈၈ မျိုးဆက်အဖွဲ့ကို ဝေဖန်နေတာက ဝေဖန်ဖို့ လိုအပ်နေလို့ဖြစ်တယ် … ၈၈ မျိုးဆက်အဖွဲ့ဟာ မင်းကိုနိုင်( ၈၈၈၈ ဗကသ) မင်းဇေယျ၊ ဌေးကြွယ် (၈၈၈၈ မကသ) ကိုကိုကြီး (သုံးချောင်းထောက် ဗကသ) ဂျင်မီ( မိုးသီဇွန်လူ့ဘောင်သစ်)တို့ ကို မဏ္ဍိုင်ပြုပြီး ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ သံဃာဦးဆောင် တော်လှန်ရေး မဖြစ်မီ ဖွဲ့ခဲ့ကြတယ် … အခြေအနေတွေအရ ကျောင်းသားသမဂ္ဂမျိုးဆက်သစ် ကို ဗကသ သမိုင်းတာဝန်လွှဲပေးခဲ့ကြပြီ …၈၈ မျိုးဆက် ဖွဲ့တယ် ကောင်းပါတယ် …. သူ့ထူးခြားမှုနဲ့သူ … သူ့ကိုယ်ပိုင် လက္ခဏာနဲ့ သူဖြစ်သွားပြီ … ၂၀၀၇ မှာ ၈၈မျိုးဆက်က လူထုတိုက်ပွဲကို ဦးဆောင်ခဲ့တယ် … ကောင်းတယ် … လေးစားတယ် … လူထုက သူတို့အူထဲ အသည်းထဲကကို လက်ခံလိုက်တယ် … ဟော ခု ပြန်ထွက်လာတယ် ပွင့်လင်းလုပ်မယ်ပြောတယ် NGO လိုင်းပဲ … ဒီတော့ အင်ဂျီအိုဟာ အင်ဂျီအိုလို စုဖွဲ့ပြီး အင်ဂျီအို နိုင်ငံရေးကို ပဲ လုပ်ရပါတယ် … သတင်းသမား သတင်းနိုင်ငံရေးပဲ လုပ်ရတယ် အဲဒီလိုပေါ့ နိုင်ငံရေးဆိုတာက စုပေါင်းလုပ်ကြရတဲ့ သဘောပါ … အကျိုးစီးပွားဘက်တွေပေါ့ … ရန်သူက ရန်သူ့အကျိုးစီးပွားအတွက်လုပ်သလို အဖိနှိပ်ခံက အဖိနှိပ်ခံ အကျိုးစီးပွားအတွက် လုပ်ကြတာပါ … ဒီမှာတင် အကျိုးစီးပွားချင်း ပဋိပက္ခဖြစ်တာပါ … အဲဒီပဋိပက္ခကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြသလဲဆိုတဲ့ ပုံသဏ္ဌာန်ကို တော့ ဖိနှိပ်ထားတဲ့ ရန်သူက ပြဌာန်းပါတယ်
ကိုယ်ယုံကြည်ချင်တာကို ယုံကြည်ခွင့်ရှိပါတယ် … ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းလဲ လုပ်ကြ ပြောကြ ရပ်ကြ ဝေဖန်ကြတာပါ ပဲ … ခုချိန်မှာ ဘယ်သူ့ကို ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကို ဘာကို မဝေဖန်ရဘူးဆိုတဲ့ ပညတ်တော်က သိပ်လက်တွေ့မကျသလို အလုပ်လဲ မဖြစ်ပါဘူး …… ဒီတော့ အတိုက်အခံဘက်မှာ ခေါင်းဆောင်မှု အခန်းကို ယူခဲ့ကြသူတွေ သမိုင်းမှာ အဆက်ဆက်ပါ … လျှောမွေးဖြစ်တာတွေ ရန်သူနဲ့ပေါင်းသွားတာတွေ … လက်နက်ချတွေ တပုံတပင်ပါ … ဒါ သူတို့တန်ဖိုး သူတို့ အဆင့်ကို သူတို့အကျိုးစီးပွားကြည့် ပြဌာန်းသွားကြတာပါ … ၈၈ ကိုဘာလို့ မဝေဖန်ရမှာလဲ ဝေဖန်ရမှာပေါ့ … ဝေဖန်ရေးဟာ နိုင်ငံရေးရဲ့ အသက်ပဲ …၈၈ ခုသွားနေတဲ့ လမ်းကြောင်းက ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတဲ့ NGO လမ်ကြောင်းကို သွားနေတာဖြစ်တယ် … ဒီတော့ ဗကသ သွားတဲ့ သမိုင်းအစဉ်အလာ လမ်းကြောင်းနဲ့ မတူတော့ဘူး … မတူလို့ သူတို့ကို အပြစ်မပြောပါဘူး … ခုကြားနေမြင်နေရတာက ၈၈ ဟာ ဗကသရဲ့ တိုက်ပွဲလမ်းကြောင်းမှာ မရပ်ခံဘဲ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု လူထုတိုက်ပွဲတွေကို တခါက ဗကသ ခေါင်းဆောင်တွေဆိုတဲ့ ခေါင်းဆောင်းနဲ့ ယောင်တောင်တောင် ဆရာဝင်ဝင်လုပ်နေတာ တွေ့နေရတယ် … အဲဒီမှာ လက်ရှိဗကသ မျိုးဆက်သစ်တွေနဲ့ ငြိကုန်တဲ့ အဖြစ်တွေ ကြားလာရတာပဲ …. နောက်တခုဆိုးတာက “ကအဖ” ဆိုတာကို မြောက်ပေးနေတာပဲ … ဒါ ကြားနေရတယ် နေရာ အနှံ့မှာ. လက်ရှိမှာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ကျော်ကိုကိုတို့ကို တာဝန်လွှဲပေးရတော့မယ်လေ …အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲ တခါက ဗကသ ခေါင်းဆောင်တွေလို အတွေးမျိုး အလုပ်မျိုး အပြောမျိုးကို အိပ်မက် မက်ချင်နေတယ် … ဒါပေမဲ့ ၈၈၈၈ ခေတ်ကလို တိုက်ပွဲဝင်ကျောင်းသားရပ်တည်ချက်မျိုး မတွေ့ရတော့ဘူး … မရှိတော့ဘူး နောက်တခုက သူတို့ကောက်ကိုင်နေတာ အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးဆိုပြီး လက်ရှိ သိန်းစိန် သမတကို ယုံကြည်လက်ခံလိုက်တာပဲ … နောက်ပြီး “နောက်ပြန်လှည့်ချင်သူတွေ” ဆိုပြီး လုံးတုတ်နေတာ ဘယ်သူ့ကို ပြောတာလဲ ကြံ့ဖွတ်ဗိုလ်ချုပ်တွေလား … ကာလုံတွေလား … နိုင်ငံရေးမှာ နည်းပရိယာယ်ကို လျှို့ဝှက်လုပ်သင့်ရင် လုပ်ရပေမဲ့ သေနင်္ဂဗျူဟာမှာ အားလုံးသိအောင် လူထုသိအောင် ခင်းကျင်းပြရတယ် … အဲဒါမှ အဖွဲ့အစည်းတခုရဲ့ တက်တစ်နဲ့ စတာတက်ဂျီဟာ လူရိုသေ ရှင်ရိုသေ ယုံကြည်မှု ရှိခြင်းခံရမယ် … ကိုယ့်စည်းရုံးရမယ့် ထုကလဲ ကိုယ့်ဖက် ရဲရဲ ရပ်ရဲမယ် … ခုဟာက လုံးတုတ်ပြီး “နောက်ပြန်လှည့်ချင်သူတွေ” ဆိုတာ ခု ဆန္ဒပြ တိုက်ပွဲဝင်နေရသူတွေကို ပြောနေသလိုလိုဖြစ်တယ် … “ကိုယ့်တပ်ကိုယ်ပြန်နင်းတယ်” ဆိုတဲ့ စကားကြားဖူးမှာပေါ့ … ဒီတော့ ယုံပါ … ယုံချင်တဲ့သူ ယုံပိုင်ခွင့်ရှိတာပဲ … ဒီလိုပဲ … ဝေဖန်ဖို့ လိုလို့ ဝေဖန်မယ် ဆိုတဲ့ လူတွေမှာလဲ ဝေဖန်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ် … ဝေဖန်မှာပဲ … အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့် ဝေဖန်ရင် လက်မခံနိုင်စရာ ဘာရှိမလဲ … နော …
ခုလဲ ကြည့်ဦး လက်ပန်းတောင်းတောင် အကြမ်းဖက်မှုမှာ ၈၈ က စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မတီဖွဲ့ဖို့ စတောင်းဆိုတယ်မလား … ဒေါ်စုက မုံရွာရောက်မှ ဖြစ်ပုံပျက်ပုံကြည့်ပြီး စုံစမ်းဖွဲ့ဖို့တောင်းဆိုတယ် … ဒါ ၈၈ နောက်ကို ဒေါ်စုက လိုက်တောင်းတယ် ရပ်တယ်လို့မြင်ပါတယ် …သိန်းစိန်ကလဲ နပ်ပါတယ် ဒီအဖွဲ့ဟာ သူ့ရဲ့ သူ့အစိုးရအတွက် မဟာ့မဟာ ခံကတုတ်ဖြစ်မယ် … ဒီတော့ကောက်ဖွဲ့ပေးလိုက်တယ် …ဒေါ်စုခေါင်းဆောင်ပေါ့ … ၈၈ က မင်းကိုနိုင် ကိုကိုကြီးပေါ့ … ဒေါ်စုကလဲ ၈၈ ကို အားကိုးတာပဲ … ဟောခုတော့ … ဒီပွဲ မလှဘူး စားရမှာထက် တုတ်ချက်ကကြီးတယ် ဆိုပြီး မပါကြတော့ဘူး ထလုပ်တယ် တရားဝင် … ဒေါ်စုခမျာ မင်းဆိုးမင်းညစ်တို့ရဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီမှာ ဆံထုံးမယ် တကိုယ်ထဲ ဖြစ်ရပြီ … ဒါဟန်ချက်ပျက်တာပဲ … ကိုယ်မပါ မလုပ်နိုင်ရင် အစက မတောင်းနဲ့ပေါ့ … တောင်းရင်လဲ ပြတ်ပြတ်သားသား အချက်အလက်တွေ ရေးတောင်းပေါ့ … လောင်တိုက်သွင်းခံရတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေတွေ့မှ ကြောက်အားလန့်အား ၀ူးဝူးဝါးဝါး ထအော် ပြီးတော့ ကျနော်မပါဘူး … ကျနော်မပါဘူး ထလုပ်တယ် ဘယ်လောက်ရုပ်ပျက်သလဲ … ဒီပုံစံနဲ့ဆိုရင်တော့ … ၈၈ အဝေဖန်ခံနေရဦးမှာပဲ … အဲ မဝေဖန်တော့ဘူး … ဝေဖန်နေစရာမလိုတော့ဘူး ဆိုရင်တော့ … ၈၈ ရေ … ကြည့်သာနေတော့ ..
ကိုပေါက် ( ကမာပုလဲ)
စကတော့ ဒီပို့စ်မတင်ဘူးနေတယ် … ဒါပေမဲ့ ခုတော့ တင်ချင်လို့တင်လိုက်တယ် … ကိုယ်ပိုင်ပရိုဖိုင်းအစစ်နဲ့ ဖေ့စ်ဘွခ်အကောင့်ဖွင့်ပါတယ် … ကိုယ်ရေးတဲ့ စာကိုလည်း ကိုယ် တာဝန်ယူပါတယ် …။
၈၈ တွေ ဒီကိစ္စမှာ ၊ တော်တော် ရုပ်ပျက်ပါတယ် ။
လူထုကြီး Emotion များနေတဲ့ အချိန် ၊
လူကြိုက်နည်းလောက်တဲ့ အဖြေမျိုး ထွက်လာနိုင်တဲ့ အခါမှာ ၊
အမှန်တရားကို မဖေါ်ထုတ်ရဲတာ တော်တော် စိတ်ပျက်ရပါတယ် ။
ခေါင်းဆောင် မဟုတ်ပဲ ၊ ခေါင်းရှောင် ဖြစ်သွားတယ် ။
ဘာဖြစ်လဲ ၊ လူမုန်းလဲ မုန်း ပေ့စေပေါ့ ၊ အမှန်ကို အမှန်လို့ ပြောပစ်လိုက်စမ်းပါ ။
အဲဒါကမှ နိုင်ငံ အတွက် ရေရှည် မှာ ကောင်းမှာလေ ။
တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်လေ ၊ ဒေါ်စု နှင့် ၈၈ တွေ ၊
ခြင်းတစ်ခုတည်းမှာ ကြက်ဥတွေ အကုန် မထည့်နှင့်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး ၊
Agreement ယူထားလို့ ၊ တမင် ရှောင်ပေးတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်လေ ။
ကျနော် ဒေါ်စုပြောတဲ့ စကားလေး အရမ်း သဘောကျတယ် ။
ကျမ ၊ အမုန်းတရား အတွက် အဖြေရှာသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။
အမှန်တရား အတွက် အဖြေရှာသွားမှာပါ တဲ့ ။
ကြုံကြိုက်နေတဲ့ အခြေအနေကိုလိုက်ပြီး ၊
အသင့်တော်ဆုံး စကားလုံးကို ရွေးသုံးသွားနိုင်တယ် ။
Capacity ပြည့်တယ်ဆိုတာ အဲဒါကို ပြောတာပဲ ။
ကျနော်တို့ နိုင်ငံ တကယ့် ခေါင်းဆောင် ကောင်းကို ရထားတာပဲ ။
၈၈ ကို ခွင့်လွှတ်ပေးပါ(သူကနိုင်ငံရေးအဖွဲ့မဟုတ်လို့ပါ)
ဟိုကအခုမှ ပြန်ထွက်လာတာ၊ ဟိုတုန်းကလိုပဲရှိသေးတယ်
အခုအထိ ကျုပ်မြင်မိသလောက် အစိုးရဖက်ကအမှားက သူတို့မီးခိုးဗုံးလို့ပြောတဲ့ဟာကို မလိုအပ်ပဲသုံးလို့ မီးလောင်ဒါဏ်ရာတွေရကုန်တာပဲ ရှိတယ်။ အဲဒါလဲ တကယ်ကိုင်သုံးရတဲ့ လုံထိန်းတွေဟာ မီးလောင်မယ်မှန်းသာသိရင် သုံးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပဲ ထင်နေမိတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဲဒီအချိန်မှာ အဓိကရုဏ်းကို နှိမ်နင်းတာမဟုတ်ဘူး။
သူ့ဟာသူနေနေတဲ့ သပိတ်စခန်းကို ဖြိုခွဲတာ။
ဒါပေမယ့် ကျုပ်တို့က ဆွမ်းကြီးလောင်းစရာတွေ့ရင် မနေတတ်ဘူးလေ..
” မီးခိုးဗုံး လို့ပြောတဲ့ဟာ ကို မလိုအပ်ပဲ သုံး ”
ဦးပါ ရဲ့ ၊ မီးခိုးဗုံး တွေ ခွဲတာက ၊
ပုံမှန် အဓိကရုဏ်း ဖြိုခွဲရေး လုပ်ငန်းစဉ် Procedure တွေထဲမှာ ပါပါတယ် ။
မီးခိုး မွန်ပြီး လူတွေ ထွက်ပြေး ၊ လူစုကွဲသွားအောင်ပါ ။
ဒါပေမယ့် ၊ မီးခိုးဗုံး ဆိုတာကလည်း ၊
igniting လုပ်တဲ့ အချိန်မှာ မီးပွားထွက်ပါတယ် ။
အဲဒီမှာ ၊ အောက်ခြေ ဝန်ထမ်းတွေက ဆင်ခြင်ဥာဏ် အားနဲတော့ ၊
ပစ် ဆိုတာနှင့် သောက်ရမ်း ပစ်လိုက်တဲ့ အခါမှာ ၊
အမိုးက တာပေါ်လင်စ တွေ ၊ နိုင်လွန် သင်္ကန်းစတွေ နှင့်တွေ့တော့ ၊
မီးလောင်ကုန်တယ် ၊ ထင်ပါတယ် ။
တို့ဆီက ဆန္ဒပြကြတဲ့သူတွေကလည်း ဗဟုသုတ အားနဲတာလည်းပါတယ် ။
သူများ နိုင်ငံတွေမှာက ရဲက မီးခိုးဗုံး ၊ မျက်ရည်ယိုဗုံး နှင့် ပြစ်တဲ့ အချိန်မှာ ၊
ဆန္ဒပြကြတဲ့သူတွေက နဲနဲ နောက်ဆုတ်ပေးလိုက်ကြတယ် ၊
မီးခိုးတွေ ရှင်းသွားတော့မှ ရှေ့ကို / မူလနေရာကို ပြန်တက်ကြတာကိုး ။
အဲဒီ့သဘောကို မသိလေတော့ ၊ မလိုအပ်ပဲ ရွာလည်ကုန်ကြရတာလေ ။
အခုထက်ထိလည်း ၊ Face Book က ဒါဏ်ရာတွေ ကြည့်ရတာ ၊
ပုံမှန် မီးလောင် ဒါဏ်ရာတွေပဲ တွေ့ရပါတယ် ။
Second Degree Burn တွေပဲ တွေ့ရပါတယ် ။
Face Book က ဓါတ်ပုံ တစ်ခုမှာဆိုရင် ၊
သူတို့က မီးလောင်ဗုံး ဆိုပြီး ကိုင်ပြထားတဲ့ ဗုံးသီးအခွံ ပေါ်မှာကို ၊
ရေးထားတာက Smoke တဲ့ ။
ပုံစံက ဒီ အရေးအခင်း ဖြစ်လိုက်တာ ၊
ဦးသိန်းစိန် နှင့် စစ်တပ် နှင့် အမာ ဂိုဏ်းသားတွေ နှင့် ၊
တော်တော်လေး ကျောခြင်းကပ် စည်းလုံးသွားစေပုံ ရတယ် ။
ဦးသိန်းစိန် က ဝမ်းနည်းပါတယ် တစ်ခွန်းတောင် မပြောဘူး ၊
အေးအေး ဆေးဆေး ပဲ ဘရူနိုင်း ကိုထွက်သွားတယ် ။
တစ်မျိုး ဖြစ်နိုင်တာ တစ်ခုက ၊
မီးစိမ်းပြပြီး ရှောင်ထွက်သွားတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ် ။
ဒီနေ့ ကစပြီး ၊ ဆန္ဒပြမဲ့သူတွေ သတိသာ ထားနေကြပေတော့ ။
ခပ် မာမာ ကိုင်တော့မယ် / ဖမ်းတော့မယ် လို့ ထင်နေတယ် ။
ဟောဒီက လယ်သူမ ဂျင်းသုတ် စပ်စပ်ကလေးတွေရမယ်…တော့
ဂီဂီ ၊ ဆိုလိုချင်တာကို သိပါ့ကွယ် ။
ပြည်သူတွေ နှင့် သံဃာတွေလည်း ၊
လယ်သူမ ဂျင်းထည့်တာကို ၊
ခပ်စပ်စပ်လေး ခံလိုက်ရတယ်လို့ ၊
ဆိုချင်တာ မဟုတ်လား ။
နောက်တစ်ခု ထပ်ပြောရဦးမယ် ။
ဟိုတစ်နေ့က VDO ထဲမှာ ဒု ရဲမှူးကြီးကို ၊
ဆန္ဒပြတဲ့ ကောင်မလေးက ရင်ဘတ်ကို တွန်းထိုးပြီး
လက်ရောက်မှု ကျူးလွန်နေတာကို တွေ့လိုက်ရတယ် ။
Face Book ထဲမှာလည်း အဲဒီ ဆန္ဒပြတဲ့ ကောင်မလေးကို ဝိုင်း ချီကျူးထားကြပြီး ၊
ရင်ဘတ်ကို တွန်းထိုးခံရတဲ့ ဒု ရဲမှူးကြီးကို အခြောက်ကြီး ဆိုပြီး ဝိုင်းပြောနေကြတယ် ။
ဒီလို အခြေအနေတွေမှာ ဒေါသ ဆန္ဒ အလျောက် လုပ်မိနိုင်တာ သိပါတယ် ၊
ဒါပေမယ့် ဆင်ခြင် သင့်လှတယ် ။
ဒီ VDO ကို ၊ ကိုယ်တွေတင်မကဘူး ၊ စစ်တပ်က လူတွေပါ ကြည့်နေတာလေ ။
( ပြီးတော့ ဒီလို အသက်ငယ်ငယ်နှင့် ဒု ရဲမှူးကြီး ဟာ စစ်တပ်ကပဲဖြစ်မှာလေ )
စစ်တပ်က လူတွေ ရဲ့ ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေပေါ် မြင်တဲ့အမြင် ပြောင်းသွားလိမ့်မယ် ။
အဲဒါက ၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်တွေအတွက် မကောင်းဘူးလေ ။
သိပ်ဘဝင်မကျတာနောက်တစ်ခုက ဒုတိယရွှေဝါရောင် အရေးအခင်း ဆိုပြီး
သံဃာတွေကို အတင်းဆွဲသွင်းနေကြတာပဲ ။
ဖွဘုတ်မှာ ချိုတူးဇော်ရေးနေတာတွေ ကြည့် ပြီး ကျနော်တို့ သဂျီးနဲ့  မတူတာလေးတွေ
သတိထားမိတယ် ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စောင့် ဖတ်နေပါဦးမယ်
ချီးကျုးပါတယ် အဘဖော ကျွန်တော် MG ကိုအမြဲတမ်းပုံမှန်ဝင်ဖတ်နေတဲ့အထဲမှာ အဘဖောပို(စ်)
တွေအမြဲပါ ပါတယ်။ အမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းမြင်နိုင်တဲ့ပညာတတ်တစ်ယောက်ရဲ့အမြင်ပါ။
ကွန်မန်.လေးတွေလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ် FB မှာ Share ခွင့်ပြုပါ။
ခုတစ်လောလဲ အဲ့ဖွဘွတ်ကြီးသုံးရတာတော်တော်လေးစိတ်ဆင်းရဲနေရတယ် အဘရေ
တွေ.နေရတာ စိတ်ပျက်လိုက်တာ :-(
Captain America ရေ ။
အမြင်တွေ ကွဲလွဲတာကို လက်ခံပါတယ် ။
ဒီမိုကရေစီ ဆိုမှတော့ ကွဲလွဲမှုက ရှိကိုရှိရမှာပေါ့နော် ။
ကွဲလွဲမှုတွေကို ပွင့်လင်းစွာ ငြင်းခုံခြင်း ကပဲ ၊
ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အမှန်တရား သဘောတရားတွေကို ပေါ်လာစေပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ၊ စိုးရိမ်တာက ၊
ဒီ ကိစ္စ ကို အမေစု ဖြေရှင်းပေးတဲ့ အထိ မစောင့်ဘဲ ၊
အတင်း လမ်းပေါ် ထွက်ကြရင်ဖြင့် ၊
အဘ အထင် ၊
ဒီတစ်ခါတော့ အစိုးရက ညှာမှာ မဟုတ်တော့ဘူး ၊ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ကိုင်လိမ့်မယ် ။
စစ်တပ်ကြီး တစ်ခုလုံးကလည်း တညီတညွတ်တည်း အစိုးရ နောက်က ပါလိမ့်မယ် ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ၊ ဒီ ဦးပိုင်က ရတဲ့ အမြတ်ငွေလေးနှင့်ပဲ တပ်ရင်း မှန်သမျှရဲ့
တပ်တွင်း သက်သာချောင်ချိရေးကို လုပ်နေရတာ တပ်ရင်းမှူးတိုင်း သိတယ် ။
စစ်သားတွေ ရှေ့တန်းထွက်တဲ့အခါ ၊
ရိက္ခာစို ရိက္ခာခြောက်တွေဟာ စစ်သားတွေ နှင့်ပေးလိုက်ရတယ် ။
နောက်တန်းမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ စစ်သား မိသားစုတွေ အတွက် ၊
စစ်သား လစာလေး နှစ်ပြားတစ်ပဲနှင့် ဘယ်လိုမှ ရပ်တည်လို့မရဘူး ။
စားဝတ်နေရေး ပညာရေး ကျန်းမာရေး ၊ အားလုံး ဒီပိုက်ဆံကိုပဲ သုံးနေရတာ ။
စစ်သားတွေကို အပိုဆောင်းထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ ၊
တစ်လ ငွေ တစ်သောင်း ၊ ဆန် တစ်အိတ် စသဖြင့်တွေဟာ ၊
အဲဒီ ဦးပိုင်ကရတဲ့ အမြတ်ငွေတွေထဲက ထောက်ပံ့ပေးနေရတာ ။
အဲဒီတော့ ဦးပိုင်ဟာ လက်ရှိ အခြေအနေမှာ စစ်တပ်အတွက် လိုအပ်နေသေးတယ် ။
ဦးပိုင်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခု ကလည်း စစ်တပ် နှင့် စစ်သားတွေ အတွက် ၊
အစိုးရက လုံလောက်အောင် ဘတ်ဂျက် ထောက်ပံ့မှု မပေးနိုင်တာကို ၊
စစ်တပ် နှင့် စစ်သားတွေက နိုင်ငံတော် ဘတ်ဂျက် ကို ဒုက္ခ မပေးပဲ ၊
ကိုယ့် အစီအစဉ်နှင့် ကိုယ် ၊ ကိုယ့်အား ကိုယ်ကိုး စီပွားရေး လုပ်ငန်းတစ်ခု ထောင်ပြီးရှာတာပဲ ။
အစိုးရ ဘတ်ဂျက်က စစ်သားတွေကို ဝမ်းဝ ခါးလှအောင် စီစဉ် မပေးနိုင်သေးသရွေ့ ၊
ဦးပိုင်ကတော့ စစ်တပ်အတွက် လိုအပ်နေအုန်းမှာပဲ ။
အဲဒီတော့ ရှင်းရှင်းလေးပဲ ၊
၁ ။ ထပ်သေကြရအုန်းမှာပေါ့ကွယ် ။
၂ ။ စစ်တပ်က နောက်တစ်ခါ အာဏာထပ်သိမ်းလိုက်ဦးမှာပေါ့ကွယ် ။
၃ ။ နောက်ထပ် နှစ် ၂၀ ထပ်စောင့် / ထပ်နောက်ကျဦးမှာပေါ့ကွယ် ။
အဲလို မဖြစ်စေချင်တာပါကွယ် ။
ဆန္ဒပြမှု့တွေ သပိတ်တွေမှာ ဆွဲခေါ်တဲ့ဗျူဟာနဲ့တွန်းပို့တဲ့ဗျူဟာ နှစ်မျိုးရှိတတ်တယ်။
၈၈ လူထုအုံကြွမှု့က ဆွဲခေါ်တဲ့ဗျူဟာနဲ့သွားခဲ့တာ။ ဆွဲခေါ်တဲပုံစံက ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစုက တရားဟောစခန်းဖွင့်ပြီး စည်းရုံးတာမျိုးပါ။ ၆၂ ကျောင်းသားအရေးအခင်း၊ ဦးသန့်အရေးအခင်း တို့တွေလည်း ဆွဲခေါ်စနစ်ပါ။ ဒါကြောင့် ၈၈ မှာ ခံစားချက်တူညီကြတဲ့ ပြည်သူတွေ လူထုအုံကြွမှု့ဖြစ်ပြီး မဆလစနစ်ကို ရပ်ခဲ့ကြတာဘဲ၊ အဲဒီတုန်းက အခုလို မီဒီယာစနစ်တွေ မပြည့်စုံသေးဘူးနော်။ ဒါပေမယ့် ရွှေဝါရောင်အရေးအခင်းက တွန်းပို့တဲ့ဗျူဟာနဲ့ လုပ်သွားခဲ့တာ။ ဒါကြောင့်ဖြိုခွင်းခံရတော့ သံဃာတွေပိုအထိနာခဲ့ရတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သံဃာတွေကရှေ့ဆုံးထိ အတွန်းခံခဲ့ရလို့ဘဲ။အခုလက်ပံတောင်သပိတ်စခန်းလည်း အဲလိုဘဲဖြစ်တာ။ တကယ်ဖြိုခွဲတဲ့ညမှာ သံဃာတွေအများဆုံးသပိတ်စခန်းမှာ ကျန်ခဲ့ပြီး အထိအခိုက်ဖြစ်ရတယ်။ အခုတစ်ချို့မီဒီယာတွေအရေးအသားကလည်း တွန်းပို့ပုံစံဆန်နေတာတွေ့ရတယ် ကိုဆာမိရေ။
၁။ အဲဒီမြေ အဲဒီနေရာသည် ကိုယ်မြေကိုယ့်ရွာဆိုရင် အဲဒီဈေးနဲ့ ကျေနပ်မလားလို့ မေးပေးပါ။
၂။ တိုင်းပြည်အာဏာ မတရားသိမ်းပိုက်ဖို့ နင်းကန်ချဲ့ထွင်ထားတဲ့စစ်တပ် မနိုင်ဝန်ထမ်းနေရတာ သနားဖို့အတော်ကောင်း၏။
၃။ ကိုယ်ကတော့ တနေ့ဒေါ်လာ၂သန်း မရလို့အော်နေတော့ အလုပ်ပျက် အကိုင်ပျက် စီးပွားပျက်ခံ ဆန္ဒပြနေတဲ့ လယ်သိမ်းခံ ပြည်သူတွေက ဘီလျံနာသူဌေးတွေလား။
၄။ အိုင်အက်စ်အိုဆိုတာ ပိုက်ဆံတတ်နိုင်ရင် ရတယ်။ ကမ္ဘာတလွှား ပတ်ဝန်းကျင် စံနှုန်းတွေ ချိုးဖောက်တဲ့ ကုမ္မဏီတွေ အိုင်အက်စ်အို မရှိဘူးမှတ်လား။
၅။ မီဒီယာက စီမံကိန်းအချက်အလက်တွေ မပြောဘူးဆိုရအောင် အဲဒီစီမံကိန်းပဲထင်တယ် ဂျာနယ်မှာထဲ့ရေးလို့ ဗွိုက်စ်လား ဘာလားမသိဘူး သတ္တုတွင်းဝံဂျီးဌာနက တရားစွဲထားတာ ရှိတယ်။ ဦးဖောရေ ခင်များသိပ်ဖက်လိုက်လွန်းနေပြီ၊ အတိုင်းအတာ တခုထိပဲကောင်းတယ်။ ဖွချင်ရင် ဘက်တဘက်မှာ ပြတ်ပြတ်သားသားရပ်ပါ။
၆။ ဒီကိစ္စက ဦးသိန်းစိန် အစိုးရအဖွဲ့ သရုပ်မှန်ပေါ်တယ်။ အတိုက်အခံနဲ့ ပြည်သူတွေကို ငါကျားသနားမှ မင်းတို့နွားချမ်းသာရမည့်ဘဝပါကွာ၊ ခြံထဲကကြက် အချိန်မရွေး ရိုက်သတ်စားလို့ရတယ် ပြတာနဲ့ အတူတူပဲ။
၇။ ဘွားဒေါ်စုမှာလည်း တာဝန်ရှိတယ်။ တပ်မဒေါ်ကို ဖျာယောင်းပြီး ကမယ်ဆိုတဲ့ နှစ်ပါသွားဇာတ် နိုင်အောင်ကပေတော့။
၈။ အင်တာနက်မှာ ဒုရဲမှူးကြီးနဲ့ ဗိုလ်ကြီးဟောင်း နေမျိုးဇင် စကားများနေတဲ့ ရုပ်သံဖိုင် ကြည့်လိုက်ရတယ်။ လက်ပံတောင်း ဆန္ဒပြသူတွေကို ရဲတွေက မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း ဆဲဆိုကြောင်း တိုင်တန်းတာ။ ဒါ တမင်တာကာ ရန်စတာ၊ ဆန္ဒပြသူဖက်က ကိုယ်ထိလက်ရောက် ပြုမူအောင် သွေးဆွတာ ဖြစ်ပါမယ်။ မခံနိုင်လို့ ခဲတလုံးပစ်မိတာနဲ့ မင်းမဲ့စရိုက်ပါဆိုပြီး မတန်တဆ အင်အားသုံး ဖိနှိပ်လိမ့်မယ်။။ ဒါမျိုး ၈၈တုံးကလည်း အတွေ့အကြုံရှိထားပြီ။ လက်ပံတောင်းက နယ်မြေကျဉ်း၊ ဒေသခံတွေပဲမိုလို့။ မြို့ကြီးပြကြီးလို လူပေါင်းစုံဆိုရင် သူတို့ဆင်တဲ့ အကွက်ထဲ အလွယ်မိတယ်။ ဒါကို မီဒီယာက ထောက်ပြထားဖို့လိုနေပြီ။
၉။ ဆန္ဒပြသူဖက်က မျက်နှာပုံစံ ညှိုးညှိုးငယ်ငယ်မရှိတာတော့ ကျုပ်တို့လည်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ဆန္ဒပြခဲ့တာပဲ၊ အဲဒါလဗျွတ်ဖြစ်လား။ မျက်နှာရယ်ပြနေတာနဲ့ မြေအသိမ်းခံရတာ မဆိုင်ဘူးလို့ ဘယ်သေဂျင်းဇိုးက ပြောသလဲ။ ဆွေမျိုးသားချင်း သေလို့ ဆယ်လစ်ဘရစ်တီအမှတ်နဲ့ လူတွေဝိုင်းအကြည့် ခံရရင်တောင် ငါကွလို့ မော်မိသေးတာပဲ။ နင်တို့အမျိုး အသုဘမှာ ဒါမျိုး မကြုံကြဖူးဘူးလား….။ လဗြွတ်ထဲမှ လခွီးပဲ။ မိုက်ကယ်အောင်ပု ဆဲတာ နဲတောင်နဲသေးတယ်။..
ဦးကြောင် ရဲ့ ။
အဲဒီ ခေတ်အခါက အဲဒီဒေသမှာ အဲဒီဈေးပဲပေါက်တာလေ ။
ဗိုလ်ချုပ် ဝေလွင် ရှင်းလင်းချက်မှာ သွားဖတ်ကြည့်ပါလား ။
စစ်တပ်ကို နင်းကန် ချဲ့ထွင်ထားတာကိုတော့ လက်ခံပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် လက်ရှိ အစိုးရက ချက်ချင်းကြီး တစ်ဝက် လျော့ချလို့မှ မရတဲ့ဥစ္စာ ၊
ဒီလိုပဲ သူပုန်တွေနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးယူပြီး ဖြေးဖြေးချင်း လျော့ယူမှ ရမှာပေါ့ ။
ဒါ လက်ရှိ အမှန်တရားပဲ ၊ ကြိုက်ကြိုက် မ ကြိုက်ကြိုက် ၊ လက်ခံရမှာပဲ ။
ကျနော်လည်း မဆီမဆိုင် ဦးပိုင်က အမြတ်ဝင်ယူတာကို ကဲ့ရဲ့ထားတာပဲ ။
ဒါပေမယ့် ၊ ဦးပိုင်လည်း ငွေရင်းထားရတယ်လို့ ဗိုလ်ချုပ်ဝေလွင် ရှင်းတဲ့အထဲပါတယ် ။
” အိုင်အက်စ်အို ဆိုတာ ပိုက်ဆံတတ်နိုင်ရင် ရတယ် ”
လွယ်တယ်ထင်ရင် လာလုပ်ကြည့်ပါလား ။
ကျနော်တို့လဲ လက်တွေ့ ISO, ISM နှင့်အလုပ်လုပ်နေတာ ။ သိတယ် ။
ISO-14000 ရပြီဆိုကတည်းက တင့်သင့်လျောက်ပတ်တဲ့ ၊
ဂုဏ်သိက္ခာ ၊ လုပ်ငန်းခွင် ကျင့်စဉ် ၊ စည်းကမ်း နှင့် တာဝန်ယူမှု ရှိတယ်ဆိုတာ ၊
ပညာတတ်တဲ့ လူတိုင်းသိတယ် ။
မီဒီယာတွေကိုပြောတဲ့အထဲမှာ ” သိရှိပါလျက် ၊ တင်ခွင့်ရှိပါလျက် ” ဆိုပြီး ၊
ထည့်ရေးထားတာ ၊ မတွေ့ဘူးလား ။
တင်ခွင့် မ ရှိ လို့ ၊ ကြောက်လို့ ၊ မတင်ရဲရင် ၊ ဘာမှမပြောဘူး ။
အဲဒါကိုတော့ သိပ် မငြင်းလိုပါဘူး ။
ဒါပေမယ့် ၊ ဦးသိန်းစိန် ဟာ ပြောင်းလဲချင်တဲ့ ရှားရှား ပါးပါး စစ်ခေါင်းဆောင် ။
သူပေးထားလို့ ဒီလောက်ရနေတာ ။ သူ့ဘက်မှာလဲ အခက်အခဲတွေ ရှိမှာပဲ ။
သူလုပ်ချင်တိုင်း လုပ်လို့ မရတာကို နားလည်ပေးရမှာပေါ့ ။
အရင် စစ်အစိုးရတုန်းက ကျနော်လည်း ပက်ပက် စက်စက် အပြစ်တင်ခဲ့တာပဲ ။
အခု စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ ဘက်က လက်သီးဆုပ်ကိုဖြေပြီး လက်ကမ်းလာချိန်မှာ ၊
အမေစုလည်း လက်ခံနိုင်လို့ လက်တွဲနေတာပဲ ။
ကျုပ်တို့က လက်သီးဆုပ်ကို မ ဖြေနိုင်ရအောင် လက်တွေက နူနေတာမှ မဟုတ်တာ ။
အခုထက်ထိ အမေစုကို ပြတ်ပြတ် သားသား ထောက်ခံတယ် ။
သူက မြန်မာပြည်ထဲမှာနေပြီး လုပ်နေရတာ ၊ အခြေအနေမှန်ကို သူသိတယ် ၊
ဒီ့ထက် မြန်အောင် လျောက်လို့ မရဘူး / မသင့်ဘူး ဆိုတာသူသိတယ် ။
အရွေ့လည်း ထိုက်သင့်သလောက် ရှိနေတာပဲ ။
အပြင်က လေ နှင့်မြှောက်ပေးတာကတော့ လွယ်တာကိုး ဗျ ။
တကယ့် တကယ် ကတော့ ကိုယ့်ပြည်တွင်းကသူတွေပဲ သေရုံ လောက်ဆို မပြောဘူး ။
နောက်ကြောင်းကို နှစ်နှစ်ဆယ်လောက် ပြန်လှည့်သွားမှာမို့ ပြောနေတာ ။
ပြည်ပကလူတွေကို ပြောချင်တာက ၊ လေနှင့်ပြောမနေနှင့် ၊
လုပ်နိုင်မယ် ထင်ရင် မြန်မာပြည်ပြန်ပြီး လာလုပ်ကြလေ ။
၁၉၈၈ ကနေ ၂၀၁၂ အထိ လုပ်နေလိုက်တာ ၊
၁ ။ စစ်တပ်ကို ၅ % လောက်ပဲပါအောင် စည်းရုံးနိုင်လို့လား ။
၂ ။ နယ်မြေ ဘယ်လောက်ကျယ်ကျယ် သိမ်းနိုင်နေပြီလဲ ။
၃ ။ ပြည်သူက အားကိုးလို့ ရနေပြီလား ။
ကျုပ်တို့ပြည်သူက အားကိုး ယုံကြည်ချင်ပါတယ် ၊
ခင်ဗျားတို့က အားကိုး ယုံကြည်လောက်အောင် တော်တော် ဖြစ်နေပြီလား ။
ထစ်ကနဲ ရှိ ပြည်သူချည်းပဲ ရှေ့ထွက်ဖို့ ပြောတာ ကြားနေရတယ် ။
၄ ။ ပြည်သူကိုရော တော်တော်ကို စည်းရုံး နိုင်နေပြီလား ။
ဟင့် ၊ ပြည်ပကလူလေနှင့်တိုက်နေတဲ့ သူတွေ အပေါ် ပြည်သူ့သဘောထားကတော့ ၊
မိုးသီးဇွန်ပြန်လာတော့ ၊ ပြည်သူက ပြပြီးပြီပဲ ၊ ရှင်းနေတာပဲ ။
သူ့ အပြစ်ချည်းပဲ ကြည့်မနေနှင့် ၊ ကိုယ့်အပြစ်လဲ ကိုယ်ပြန်ကြည့်ကြအုန်း ။
ကက်စထရို ၊ ပုန်ကန်တုန်းက လူ ငါးယောက်နှင့် စတာ ၊
အောင်မြင်တယ် ၊ ဘာ့ကြောင့်ထင်သတုန်း ။
ဆက်မပြောချင်ဘူး ၊ ပြောရင် ကိုယ့် ဒီမို အချင်းချင်း ချနင်းရာကျတော့မယ် ။
အဘ ပြောပုံ ဆိုပုံ နှင့်က ၊ တော်ကြာ စစ်တပ် စိတ်ဓါတ် စစ်ဆင်ရေး ကပါ လာငှားနေလိမ့်မယ် ။
ပြောစရာတွေမှ သြတိုက် ကျန်နေသေးတယ် ။
ဒီ သြဇီမှာလည်း ပေါင်းနေတာ ဒီမို Refugee တွေနှင့်ပဲ ပေါင်းနေတာ ။
အကုန် သိနေ ၊ ကြားနေရတယ် ။
အင်တာနက်မှာ ဗိုလ်ကြီးဟောင်း နေမျိုးဇင် နှင့်ဖြစ်တာက ဒုရဲအုပ် ။
ကျနော် အဲဒီ ကိစ္စကို ပြောနေတာ မဟုတ်ဘူး ။
အဲဒီထဲက ၊ ဒုရဲမှူးကြီး ကို ဆန္ဒပြတဲ့ ကောင်မလေးက ရင်ဘတ်ကို တွန်းထိုးပြီး
လက်ရောက်မှု ကျူးလွန်တာကိုပြောနေတာ ။
ကျနော်ကလည်း ရီရမယ် ၊ ညိုးရမယ် မပြောပါဘူး ။
မီဒီယာက ဇတ်လမ်းရအောင် အတုငိုခိုင်းတဲ့ ကိစ္စကိုပြောနေတာ ။
မှားရင်တော့ မှားတယ် ၊ လိမ်ဆင် ကို လိမ်ဆင် ပဲပြောရမှာပဲ ။
ဒီကိစ္စကို ဒေါ်စုကိုယ်တိုင် မီဒီယာ သမားတွေကို ခေါ်ပြီး အပြစ်တင်တာ ၊
မီဒီယာ သမားတွေ အကုန်လုံး ငြိမ်ပြီး ခံခဲ့ ရတာ မတွေ့ဘူးလာ ။
ဦးကြောင် ၊ ခင်ဗျား ဆဲဆိုနေတဲ့ ကိစ္စကတော့ ၊
ပါးစပ်ပါရင် လူတိုင်း မိုက်မိုက် ရိုင်းရိုင်း ဆဲတတ်တာပဲဗျ ။ ဘာခက်လို့လဲ ။
ကျုပ်ကတော့ ကျုပ် ခံယူချက် ၊ ကျုပ် အဆင့်အတန်း နှင့် ပြန်ဆဲလိမ့်မယ် မထင်နှင့် ။
အခု ကျုပ်က ခင်မင် ရင်းစွဲရှိလို့ အကြောင်းပြန်တယ်မှတ်ပါ ။
နောက်တစ်ခါ ဆဲ လို့ရှိရင်တော့ ခင်ဗျားကို အကြောင်းပြန်လိမ့်မယ် မထင်နဲ့ ။
ခင်ဗျား ဆက်ဆဲချင်ရင် ၊ ခင်ဗျား အဆင့်အတန်း ခင်ဗျားပြတာပဲ ။
ဒါဆို အောင်ပုကြတော့ရောဗျာ။။ သူ့ကြတော့ ကောင်းတယ် ဟုတ်စ…။ တေဂျင်းဇိုးငပု.. :mad:
ဂလိုဖြစ်မယ်ထင်တယ် ဦးကြောင်ရဲ့ 
ကိုပုကြီးကို ဆဲဆိုခြင်းအနုပညာဆိုပြီး နေရာပေးထားတာဆိုတော့ …….
ဦးကြောင် ကလည်း ဘပုကို သွားစနေပြန်ပြီ ။ မလုပ်ပါနှင့် ။
ဘပု နှင့်လည်း တစ်ခါ ကတောက်ကဆ ဖြစ်ဘူးပါတယ် ။
ဦးကြောင် သိပါတယ် ။ အခု အေးအေးဆေးဆေး ပြေလည်နေပါပြီ ။
ကျနော် စိတ်ဆိုးတုံး မန့်လိုက်တယ် သဘောထားပါ ၊ ဦးကြောင် ။
Sorry ပါ ။
Foreign Resident အစား ၀မ်ပေါင်ရှေ့ နေ လို့ သာ နာမည်ပြောင်းတပ်လိုက်ပါတော့ဂျာ…..
ဒါမှ မဟုတ် ကျွန်တော့်လို MPT ဖက်မှအခမဲ့ရှေ့ နေလိုက်ခြင်းဆိုပီး….
အဘလည်း ၀မ်ပေါင်ဖက်မှ အခမဲ့ရှေ့ နေလိုက်ခြင်းဆိုပီး
ရဲရဲတင်းတင်း တဖက်သာ ရပ်လိုက်ပါတော့ဗျာ…….
ဂဇက်ရွာကို ဒီမိုရွာလို့ မြင်မိတဲ့အလျောက် မျှမျှတတ အရေးအသားကိုသာမျှော်လင့်ပါတယ်….
အဘရဲ့ အရေးအသားက အဲ့လိုတဖတ်စောင်းနင်းဖြစ်နေတာကတော့ တကယ်စိတ်ပျက်စရာပါပဲ…..
အဘရေ ဖြစ်နေတာကတော့ အကုန်ပါပဲ…
ပြောတာတွေကလည်း မှားတယ်လို မဆိုပါဖူး…..
ခံသာအောင်တော့ ရေးတက်ဖို့ လိုတာပေါ့နော်………
အဘပြောတာကို မခံချင်လို့ ဂဇက်ရွာကို အတိုက်ခံရရင် ရှင်းရမှာက သဂျီးခိုင် အဘမဟုတ်တာလည်း အားနာပေါ့နော်……..
ကိုရင် တိမ်မည်း ရ ။
အခု Post မှာ ၊ ကျနော်က ဝမ်ပေါင် အကြောင်းပြောနေတာ မဟုတ်ဘူး ။
ဝမ်ပေါင် နှင့် စပ်စပ် ယှက်ယှက် ဖြစ်မှာစိုးလို့ ၊
ခေါင်းစဉ်ကိုတောင် လက်ပန်တောင်း လို့ပေးထားသေး ။
အခု Post မှာ ၊ အမေစု ကို ထောက်ခံပြီး ၊
ဦးသိန်းစိန် ၊ စစ်တပ် နှင့် ဦးပိုင် ဘက်ကလည်း စာနာပေးပါအုန်းလို့ ပြောနေတာလေ ။
ဦးပိုင် ကိုလည်း တစ်ချို့ အချက်တွေ အပြစ်တင်ထားသားပဲ ။
အပြစ် မရှိတဲ့ အပိုင်းကိုတော့ ၊ ဘယ်လို အပြစ်တင်ရမလဲဗျ ။
နောက်ပြီး ၊ အခြေအနေမှန်ကို လက်မခံပဲ ၊ မညှိနှိုင်းပဲ ၊ သည်းခံလိုစိတ် မရှိဘဲ ၊
ခံစားချက်အတိုင်းကြီးပဲ ဆက်လုပ်နေလို့ကတော့ ၊
ခင်ဗျားတို့ တိုင်းပြည် စစ် ဘယ်တော့မှ ရပ်မယ် မထင်နှင့် ၊
ဘယ်တော့မှ တိုးတက်လာမယ် မထင်နှင့် ။
အခု ဘင်္ဂါလီ ကိစက္စ အေးပြီ ထင်နေလို့လား ။
ယိုးဒယား အိမ်ရှေ့စံက သူ ဘုရင်ဖြစ်ရင် မြန်မာပြည် နှင့်
စစ်တိုက်မယ် ဆိုပြီး ကြိမ်းထားတာ မသိဘူးလား ။
နာ စရာ အမြင်နှင့် လျှောက်ကြည့်နေရင်တော့ အကုန် နာ စရာ တွေချည်းပဲဗျ ။
အခြေအနေမှန်ကို လက်ခံနားလည် ၊ သည်းခံ စရာရှိ သည်းခံ ၊
သူ့ဖက် ကိုယ့်ဖက် ညှိနှိုင်းပြီးပဲ ၊ ရှေ့ဆက်လျှောက်ရမှာဗျ ။
ဘုန်းကြီး မျက်နှာ နှင့် ခေါင်းတစ်ခြမ်း ပြည်တွေတွေ့တော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်တာပဲဗျ ။
ဒါပေမယ့် 2nd Degree Burn ထင်တာကို 2nd Degree Burn ပဲပြောရမှာပဲ ။
3rd Degree Burn မှာက အသားတစ်ခုလုံး ကျက်သွားတာ ပြည်မတည်တော့ဘူး ပြတ်ကျမှာဗျ ။
ပြည်တည်တယ်ဆိုတာ အသားက Reaction ပြန်လုပ်နေတာ ၊ ကံကောင်းတယ် မှတ်ပါ ။
အေး 2nd Degree Burn လဲ များရင်တော့ သေမှာပဲ ။ ဘယ်လောက် % လဲမသိတော့ဘူး ။
အရင်တုန်းကတော့ Rule of9ဆိုပြီး သင်ဖူးတယ် ၊ မေ့သွားပြီ ။
ခင်ဗျားက ” ပြောတာတွေကလည်း မှားတယ်လို မဆိုပါဖူး ” ဆိုတော့ ၊
ကျနော် ကလည်း ဘာ ဆက်ရှင်းပြရမတုန်းဗျ ။
အဖြစ်မှန်ကိုသိချင်ရင် နှစ်ဖက်စကားနားထောင်ပြီးမှ သုံးသပ်ပါ။
အဖြစ်မှန်ဆိုတာထက် ဖြစ်နေတာက ဗျူဟာကျကျ အကြောင်းရင်းတခုကို သွားနေတာပါ…..
အပြင်မှာ ဖြစ်ပျက်နေတာ အားလုံးက တကယ်တမ်းတော့ ချက်ခုံပေါ်က နယ်ရုပ်လေးတွေ ပါပဲ….
တကယ်တမ်း တော့ ဒါတွေ အားလုံးက ချက်ထိုးနေတဲ့သူရဲ့ ရွေ့ ကွက် တကွက်ပါ……
မျက်စိက ဖွင့်ထားရလွန်းလို့ကျိန်းတောင် ကျိန်းနေပါပီ……..
မျက်စိမှိတ်အော်နေတာက ဘယ်သူလဲဆိုတာ မပြောတော့ပါဖူး…..
အဖြစ်မှန်ကို သိချင်တယ်လို့ များပြောမိလားဗျာ…….
နားမထောင်မိဖူးလို့ ကော ပြောမိလား…….
မျက်စိမှိတ်ထားတယ်လို့ ကော ပြောမိလား…….
နဂါးနီပုံနဲ့ ဆိုတော့ ဘာများကိုယ်စားပြုလဲဟင်….
” အဖြစ်မှန်ဆိုတာထက် ဖြစ်နေတာက
ဗျူဟာကျကျ အကြောင်းရင်းတခုကို သွားနေတာပါ…..
အပြင်မှာ ဖြစ်ပျက်နေတာ အားလုံးက
တကယ်တမ်းတော့ ချက်ခုံပေါ်က နယ်ရုပ်လေးတွေ ပါပဲ ”
ကိုတိမ်မည်းရဲ့ အဲဒီ စကားလေးကို ကြိုက်တယ် ။
ဒါပေမယ့် ၊ အချက်အလက် မလုံလောက်သေးတဲ့ အတွက် ၊
အဘ ကတော့ အဲလို လိုက် မပြောနိုင်သေးဘူး ။
မှန်တာပြောရရင် ၊ လက်ပန်တောင်း ကိစ္စမှာ ၊
လူသေအလောင်းတွေ ထလာ စကားပြောတဲ့ ပုံစံ ၊
Performance လုပ်ကတည်းက ၊ နဲနဲ စိတ်လေနေတာ ။
အခုကိစ္စမှာ ဘယ်ဘက်ကမှ ရှေ့နေမလိုက်ချင်ဘူး
ဝမ်ပေါင်နဲ့ ဦးပိုင်နဲ့ကလည်း လွန်တယ် (ဒေသခံတွေကို တန်ရာတန်ကြေးမပေးပဲ မဖြစ်စလောက် လျော်ကြေးလေးနဲ့ လုပ်ထားတာ၊ ချောင်းတွေ မြောင်းတွေပိတ် ကုန်တော့ ဒေသခံတွေ သောက်စရာရေမရှိတော့ဘူး) ဒီနေရာမှာ တစ်ခုသတိထားရမှာက အရင်တုံးက အိုင်ဗင်ဟိုး လုပ်တုံးက ဘာသံမှ မကြားရဘူး ။
တစ်ချို့ဒေသခံတွေကလည်း လွန်တယ် (လယ်တွေ ယာတွေမစိုက်ပဲ ကြေးခိုးထုတ်ပီး ချက်နေကြတာ၊ဘာမှမလုပ်ပဲ ရိုးရိုးသားသား လယ်စိုက်စားတဲ့တောင်သူတွေ နစ်နာတယ်)
မီဒီယာတွေ နိုင်ငံရေးသမားလှည့်စားချက်တွေ (သံဃာတော်တွေကို အတင်းဖုံးဆက်ခေါ်ပီး အသုံးချတာတွေ) စတာတွေ အများကြီးပါပဲ
ကျနော်ကတော့ ဘာမှမသိဘဲ ဖင်ကုန်းပီးအော်မနေချင်ဘူး
တောသူဆိုတာ တကယ့်ကိုရိုးတယ်.. ဘာဘာညာညာတွေလည်းနားမလည်…
ဟန်တွေပန်လည်း မတတ်တယ်… “””
အမျိုးပါ ဆဲချင်သပါ့လေး.. (အချုပ်တန်းဆရာဖေ)
နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာမှာ ရေးထားတဲ့ပုံအရ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဟာ အတွေ့ အကြုံ မရှိဘူး။ အခုလို စနစ်တကျ လုပ်ရမယ့်ကိစ္စ။ အထိခိုက် အနည်းဆုံး လုပ်ရမယ့်ကိစ္စမှာ ကျွမ်းကျင်မှု မရှိဘူး။ ဒါဟာ ထင်ထင်ရှားရှား ပေါ်လွင်နေတယ်။
ရေနဲ့ ပက်ပြီးမှ မီးခိုးဗုံးသုံးတဲ့အခါ မီးခိုးဗုံးမှာည ပါတဲ့ ပေါ့စဖတ်နဲ့ ရေ ဓါတ်ပြုပြီး အက်ဆစ် ဖြစ်သွားတယ်။
ဒါကို ရဲတွေ သိရဲ့လား။ သူတို့ကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့က ဆရာ့ဆရာကြီးတွေရော သိပါသလား။ (မထင်!!!!!!!!!!)
ရည်ရွယ်တာကတော့ လူစုခွဲဖို့ပဲ လုပ်ခဲ့တဲ့ သဘောပါ။ တစ်ကယ်တမ်း ဖြစ်သွားတာကတော့ အရေပြားတွေလောင်ကျွမ်းတဲ့ အထိ ဖြစ်ကုန်တယ်။ ဆရာတော်တွေကလည်း စောင်ကို ရေစိမ်ပြီး ရေစိုစောင်ခြုံပြီး ဖယ်မပေးဘဲ ကျောက်ချ နေခဲ့ကြတာ တွေ့ရတယ်။ ဆရာတော်တွေရဲ့ အပြောအရ မျက်ရည်ယိုဗုံးကို ရေစိုအဝတ်နဲ့ ခံသာမယ်ဆိုတဲ့ အသိပဲ။ တစ်ကယ်တမ်းကျတော့ ဒီလို အသားတွေ ကွာကျတဲ့အဆင့်အထိ ရောက်သွားစေတဲ့ အက်ဆစ်တွေ ဖြစ်လာတာ ဖြစ်တယ်။
အီလဲဗင်းမှာ အဆဲတွေကြားက ရှားရှားပါးပါးမန့်ထားတာလေးတစ်ခုတွေ့ လို့ သယ်လာတာ
အခုဖြစ်သွားတဲ့ ကိစ္စက အစကတည်းက အရှုံးကြီးကို ဇွတ်တိုးလုပ်လိုက်လို့ပါ။ အခင်းအကျင်းအရ ဆန္ဒပြသူတွေ ဘက်မှာ ၂၀ရာခိုင်နှုန်းတောင် အားသာတာမရှိပါဘူး။ နောက်တခုက ဒီပွဲစကတည်းက နာမည်ပေါက်ရပီးသား ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ငြိမ်နေပါတယ်။
နောက်ကသာ လူမမြင် သူမမြင် အားပေးနေ၊ အချက်အလက်တွေ ထောက်ပံ့ပေးနေတာပါ။ ဘယ်ကိစ္စမဆို အကောင်အထည်ဖော် တာကတော့ ကောင်းတဲ့ ဇွဲတမျိုးမို့ အားပေးပါတယ်။
နောက်တခုက လတ်တလော ကိုယ်နဲ့ရင်းတဲ့ နိူင်ငံရေးသမားတွေကို ကျနော် အကြိုက်မတွေ့တော့ပါ။ သူတို့ကို လေးစားသမှု ရှိပေမဲ့ သူတို့လုပ်နည်းတွေ ခေတ်နဲ့သိပ်မကိုက်သေးဘူးထင်ပါတယ်။ သွေးဆူလွယ်တဲ့ လူထုအခြေပြုနည်းတွေက တခါတရံပဲ ကောင်းမယ် ထင်ပါတယ်။ အစိုးရကို အမြဲတမ်း အတိုက်အခံလုပ်နေဖို့ မလိုဘူးထင်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် အပြောခံရမှ ကြောက်တော့ မျက်စိမှတ်ပီး ဇွတ်နင်းနေကြရပုံ များပါတယ်။
မကြာခင် မိုးထိ၊ မိုးမိ ကိစ္စ ပွဲဆူလာပါအုံးမယ်။ မြင်ယောင်နေပါပီ။
သူများကို တိုက်ချင်ရင် ကိုယ်က စနစ်တကျနဲ့ အစစအရာရာ ကြိုတင်စုဖွဲ့ဖို့ လိုမယ်ထင်ပါတယ်။
ဘုန်းဘုန်းတွေလဲ အားထုတ်တဲ့ အပိုင်းမှာဘဲ နေစေချင်ပါတယ်။ သီတဂူဆရာတော်ကြီးလို လုပ်တတ်ဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်။ ငယ်ငယ်က ကိုရင်ဝတ်တော့ မနက်အိပ်ရာထကနေ ညအိပ်တဲ့ အထိ ယားလို့တောင် မကုတ်အားပါဘူး။ ခုကျ ဒေါ်စုပြန်လာလည်းပါတာဘဲ ၊ အိုဘားမားလာတော့လဲ ပါကြပြန်တယ်။ မတရားမှု၊ ဆန္ဒပြမှုလည်း ပါကျပြန်ပီ ၀ိနည်းတွေထဲ ခေတ်မှီ ဘုန်းကြီးဖြစ်ရင် ဒါတွေ လုပ်ဖူးရမယ်လို့ ထည့်တောင်ဆွဲပေးရမလို ဖြစ်နေပါဘီ။
လူထုရော လူထုကို ဦးဆောင်နေ၊ ဦးဆောင်ချင်နေသူတွေ ရင့်ကျက်ဖို့၊ ပါးနပ်ဖို့၊ စာတတ်ဖို့(ဘမ်းစကား) လိုနေပါပီ။ဟိုဆြာများက အလွန်ပါးရည်နပ်ရည် ရှိကြပါတယ်။ တော်တယ်တောင် ပြောရအုံးမယ်။ သေချာတွေးကြည့်ရင် အလွန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ ကလိန်ကကျစ် ဗျူဟာတွေ၊ သွေးအေးတဲ့ အပိုင်းတွေ သူတို့ဆီက သင်ယူစရာပါ။
အပေါ်က ချာတူးရေးထားတာလေး ဖတ်မိလို့ ဆက်တွေးကြည့်ပါတယ်။
ရဲတွေ မှားတယ်လို့ ပြောမရပါ။ သူတို့ကတော့ လုပ်စုခွဲဖို့ သူတို့ သင်ထားသလောက် လုပ်ကျမှာပါဘဲ။ Smoke Bomb သုံးရင် မီးသတ်ပိုက် မသုံးရပါဘူး။ လူစုခွဲနည်း အမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ ရဲတွေ ပရိုဆီကျူယာ မနိူင်တာလဲ ပါပါတယ်။ လူအင်အားသုံး ခွဲရင် မီးခိုးဗုံး၊ တုတ်တွေ သုံးပီး လူစုထဲ ၀င်ပီးခွဲကြတာ မြင်ဖူးတယ်။ အဲ့လို မသုံးချင်ရင်တော့ မီးသတ်ပိုက်နဲ့ အဝေးက ပက်ပီးခွဲတာမျိုး လုပ်လေ့ရှိတာ တွေ့ဖူးပါတယ်။
ဆိုတော့ ပါးရည်နပ်ရည် ရှိရမဲ့ အပိုင်းတွေမှာ ပြေးတာပါပါကြောင်း ပြောလိုပါတယ်
“နိုင်ငံရေးဆိုတာဟာ….. မတော်တဆမရှိဘူး “..အာလုံးအကွက်ချဖြစ်လာတယ်လို့ အမေရိကန် သမ္မတ ရုစဘဲ ပြောတာကြားဖူးတယ်….
ဘာသာရေးမဆန်တဲ့ Post တွေမှာ Comment ပေးခဲတဲ့ ၊
” Ko out of… ” ရဲ့ ရှားရှားပါးပါး Comment အတွက် ၊
အာလုံး အကွက်ချ ဖြစ်လာတာ ဆိုတဲ့ အထဲမှာ ၊
ဘုန်းကြီးတွေချည်းပဲ ကျန်ခဲ့ပြီး ဒါဏ်ရာရသွားတဲ့ အကွက် ကတော့ ၊
အမေရိကသမ္မတွေထဲ.. ၀ါရှင်တန်၊ လင်ကွန်း၊ ရုစဗဲ့တို့က.. ထိတ်တန်း လူကြိုက်အများဆုံးတွေပေါ့..။
Franklin D. Roosevelt (American 32nd US President (1933-45)
သူတို့စကားတွေက.. နိုင်ငံရေးသမားတွေ.. ဖတ်ကြလေ့လာကြရပါတယ်..။ :harr:
” ဒီလောက်အထိဖြစ်စရာမလိုတဲ့ကိစ္စ ၊
uncle gyi ရေ ။
ထီကနဲဆို ၊ ခံလိုက်ရတော့ ၊ ဘုန်းကြီး ။
ဘုန်းကြီး ကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေ အကုသိုလ် ဖြစ်သလို ။
နောက်ကွယ်က စွတ်တွန်းနေတဲ့သူတွေလဲ အကုသိုလ် ဖြစ်မယ် ထင်တယ် ။
အစက ဓါတ်ပုံတွေကြည့်လိုက်တန်း သံဃာတော်တွေ ဒဏ်ရာအပြည့်နဲ့ ပုံတွေပဲ မြင်ရလို့ဒေါသ တော်တော်ဖြစ်မိတယ် ။ အဲဒီ သံဃာတော်တွေကို ခေါ်လာပြီး ထားပြေးသွားတဲ့ကောင် အဲ့ကောင်လဲ အတူတူခံပေါ့
ဒီနေ့ ၎.၁၂.၂၀၁၂ မနက် မန်းတလေးဆေးရုံကြီးက ပြန်လာတဲ့ အသိကို သတင်းမေးကြည့်တော့ ဒဏ်ရာရတဲ့ အရပ်သားတွေ ရှိတယ်တဲ့ ၊ အဖမ်းခံရမှာ စိုးလို့ အစောပိုင်းက ဆေးရုံလာမပြကြတာတဲ့
အခု ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စမှာ
နိုင်ငံကြီးတွေ က ဘာအသံမှမထွက် ၊ ဘာမှလဲ ဝင်မပါပုံထောက်ရင်တော့
ဦးသိန်းစိန် နဲ့ ဒေါ်စု ကို အဓိက ထားတိုက်ခိုက်တဲ့ နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်ကြီးလို့ မြင်လာမိတယ်
” နိုင်ငံကြီးတွေ က ဘာအသံမှမထွက် ၊ ဘာမှလဲ ဝင်မပါပုံထောက်ရင်တော့ ”
ကိုပေ ရဲ့ ။
သူတို့ မီဒီယာ တွေက ဒါကို သိပ်ကြီးတဲ့ကိစ္စလို့ မယူဆဘူးဗျ ။
လိုရင်းက ၊ လူတစ်ယောက်မှ မသေလို့ဗျ ( No Casualty ) ပေါ့ဗျာ ။
မြန်မာတွေကတော့ ဘုန်းကြီးတွေထိသွားတော့ စိတ်လှုပ်ရှားကြတာပေါ့ဗျာ ။
သပိတ်စခန်းက ဆြာတွေ worst case scenario အဖြစ် အင်အားသုံး နှိမ်နင်းခံရမှာကို
မစဉ်းစားဘဲ မနေပါဘူး … အဲ့လို စဉ်းစားမိကြမယ့်ကြားထဲကမှ ဘုန်းကြီးပင့်သူတွေ ရှိတာ..
အတော်လေး လက်ဖျားခါပါကြောင်း … သက်သက်မဲ့ .. သယံဇာတ အကြောင်း
နည်းပညာအကြောင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးအကြောင်း နိုင်ငံရေး ကစားကွက်အကြောင်း
အများစု နားမလည်တဲ့ (မယ့်) ဘုန်းကြီးတွေကို သက်သက် စတေးခံဖြစ်အောင် ဆွဲသွင်းတယ် မြင်မိကြောင်း
တကယ်က ဘုန်းကြီးတွေက လိုလိုချင်ချင် လာပူးပေါင်းရင်တောင် worst case ဖြစ်လာနိုင်တာမို့
အရှင်ဘုရားတို့ ဘေးဖယ်နေပါဘုရား လျှောက်သင့်တာ မဟုတ်လားဗျာ …
(အင်း …worst case ဖြစ်လာလို့ ဘုန်းကြီးထိရင် ပိုဆဲလို့ကောင်းမယ် များယူဆထားသလားမဆိုနိုင်)
အဆိုပါ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ဖော်ထုတ်ဖို့ အချိန်ကျပြီ ထင်ပါကြောင်းဗျာ..
ကျုပ်တို့လဲ သင့်တော်သလို ဆည်းကပ်ရတာပေါ့……
သင်္ကန်းအနီရောင်ဆို အလေးပြု- ဆိုတာမျိုး………
ဦးဦးပါလေရာ ပြောတဲ့ အရောင်ခွဲတာကို
Good Idea ဦးပါရေ။
သင်္ကန်း အပြာဆိုရင် ……………….. ?????
ဟတ် ဟတ် ဟတ်ချိုးးးးးးးးးးးးးးးး
ဟိုနေ့ ကမှ ငြိမ်းချမ်းရေးယူထားတာ………….
အောင်မငေးးးးးးးးးးးး လိုင်းတွေပူးကုန်တော့ မလို့ 
အဘရေ ပထမဆုံး ကော်မန့် လေးအတွက်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ….
လက်ပန်တောင်း ကိတ်စမှာ လူသေအလောင်းကိတ်စကို အဘတင်မကပါဖူး မုံရွာသား ကျွန်တော် သူငယ်ချင်း အရင်းခေါက်ခေါက် ကြီးတွေပါ ရှက်လွန်းလို့ ပါတဲ့……..
သတင်း မလုံလောက်သေးတာတော့ အမှန်ပါ……..
လက်ပန်တောင်းဖြစ်တော့ စကားတွေ များများပြောပီး များများမေးမိလာတော့….
ကိုယ့်ဘက်က မှားတာ ပိုများနေတာကိုတော့ သတိထားမိတာ အမှန်ပါ………..
အဲ့ဒါကြောင့် လည်း နောက်ပိုင်း အဘ ပို့ စ်တွေကို လိုက် မမန့် မိတာပါ…….
ဟိုနေ့ က နဲနဲ စိတ်ခုနေလို့မန့် လိုက်မိတာပါ….. ဆောဒီးနော်…..
အဘကို ဖြစ်စေချင်တာကတော့ နဲနဲလေး မျှမျှတတ ရေးစေချင်တာပါပဲ…..
ပိုပီး စဉ်းစားပီး ပိုပီးရေးစေချင်တာပါ…..
တအားလည်း မစဉ်းစားလိုက်ပါနဲ့တချို့ က စဉ်းစားမိရင် စိတ်ညစ်ပီး ဘာမှ ရေးချင်စိတ် မရှိတော့လို့ ပါ……
ရွာ့ ဆယ်လစ်ဗျစ်တီ ကြီး ကဘုန်းကျော်ကတော့ ဂလို ပယ်ပယ်နယ်နယ် သမထားလေရဲ့ဗျာ …
သူပြောတာတွေက ကြမ်းပေမယ့် (သူကိုယ်တိုင်လည်း သူပုန်ဟောင်း မိုင်းလုပ်သားဟောင်းမို့)
လက်တွေ့အင်မတန်ကျတယ် ယူဆလို့ ရှဲလိုက်ရပါသည်။
လှည့်ပတ်ဆဲဆို စန္ဒာပြတာတွေ တော်သင့်ပြီထင်ပါကြောင်း…
လက်ပံတောင်းတောင်ကြေးနီစီမံကိန်းကို လုံးဝမရပ်သင့်ဘူး။ ဒေသခံတွေနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်စေတာ တကယ်မှန်ရင် ပြုပြင်ဖားထေးစရာနည်းလမ်းတွေ တစ်ပုံကြီးရှိတယ်။
အခု လွှတ်တော်ကနေ ဖွဲ့ စည်းပေးလိုက်တဲ့စုံစမ်း စစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ဆိုတာက ဘာနဲ့ တူသလဲဆိုရင် ရောဂါသည်ကို မန်းမှုတ်ပေးမဲ့လူနဲ့ တူနေတယ်။
တကယ်တမ်းဖြစ်သင့်တာက Internal Audit and External Audit လို့ ခေါ်တဲ့ စာရင်းစစ်အဖွဲ့ တွေကို စစ်ဆေးဖို့ ပဲ။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်မှာ မိုင်းအကြောင်းကို ဘာမှ မကျွမ်းတဲ့လူတွေ၊ ဘာမှမဆိုင်တဲ့လူတွေကို ထည့်ပြီးလုပ်မဲ့အစား အထက်ကပြောတဲ့ဟာကို လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။
မိုင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှု့ ကို ကာကွယ်ချင်ရင်၊ ထိန်းသိမ်းချင်ရင် လုပ်ရမဲ့အလုပ်က ဒါတွေဖြစ်တယ်။
၁) အစိုးရ ချမှတ်ထားတဲ့ မိုင်းနင်းဥပဒေကို ကုမ္မဏီက လိုက်နာလား။
၂) International Standard Organization (ISO) ရဲ့Guideline တွေလိုက်နာလား။
ဒါတွေကို လိုက်နာပါတယ်၊ အကောင်အထည်ဖော်ပါတယ်လို့ကြေးနီးတောင် စီမံကိန်းရဲ့ ရီပို့ မှာရေးထားတယ်။
၃) လူထုတွေကို ကြေနပ်တဲ့အထိ ဘာလုပ်ပေးမှာလဲဆိုတဲ့ တိကျတဲ့ ရည်မှန်းချက်နဲ့ အချိန်ဇယားရှိရမယ်။
တကယ်လို့ မရပ်နိုင်ဘူးဆိုရင် အထက်ကပြောတဲ့အချက်သုံးချက်ကိုတော့အနဲဆုံးလိုက်နာအကောင်အထည်ဖော်ရပါလိမ့်မယ်။
ဦးအောင်မင်းပြောတဲ့ တရုတ်ကို ကျေးဇူးဆပ်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာ လူထုက ဆပ်ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ အာဏာသိမ်းအစိုးရအဆက်ဆက်နဲ့ သူခိုးကြီး သူဌေးတွေဆပ်ရမှာဖြစ်တယ်။ လူထုနဲ့ ဘာမှမဆိုင်သလို လူထုက ဒီလောက် စုတ်ပြတ်နေတာ ဘာနဲ့ ဆပ်ရမှာတုန်း။
ဗကပကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်၊ ညာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ဆင်ခြေကိုပေးနေမဲ့အစား…အစိုးရတွေ စောက်သုံးမကျလို့ ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်နေတာကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ပြတ်ပြတ်သားသား ၀န်ခံရမဲ့ အချိန်ဖြစ်တယ်။ ဒီလိုဝန်ခံလိုက်ရင် ပြည်သူက ပိုလို့ တောင် ထောက်ခံလာအုံးမယ်။
အခုအချိန်အထိ နအဖ၊န၀တ မှားခဲ့တာကို မှန်နေတုန်းပဲလို့ ပြောတာကတော့ သဘာဝမကျဘူး။ အဲဒါ ပွင့်လင်းသော သန့် ရှင်းသော ငါးနှစ်သက်တမ်းကို တာဝန်ထမ်းမဲ့အစိုးရလား။
လက်ပံတောင်းတောင်တင်မဟုတ်ဘူး၊ မည်သည့် မိုင်းလုပ်ငန်းမဆို လုပ်တတ်ရင် အရမ်းအကျိူးရှိသလို၊ မလုပ်တတ်ရင် သားစဉ်မြေးဆက် လူညွန့် တုန်းတတ်တယ်။ အခုဟာက မလုပ်တတ်လို့ဒီလောက်ပွက်လောရိုက်နေတာပဲ။
ငွေကုန်တယ်။ လူပင်ပန်းတယ်။ အချိန်ကုန်တယ်။
ဒီတော့ လက်ပံတောင်းတောင်ကို ခဏပိတ်။ စာရင်းစစ်၊ အင်စပတ်ရှင်ဝင်။ အစိုးရစည်းမျဉ်းနဲ့ နိုင်ငံတကာ စည်းမျဉ်းတွေကို လိုက်နာမှု ရှိမရှိ ကျွမ်းကျင်သူတွေကို ခေါ်ပြီးစစ်။ ပျက်ကွက်ရင် ဒဏ်ရိုက်၊ ထောင်ချ။
ပြီးရင် Rehabilitation ပြန်လုပ်။ Restructure ပြန်လုပ်။ ပြန်တူးရင် တစ်ရက်ဒေါ်လာ ငါးသိန်းဝင်ငွေအနဲဆုံးရှိတဲ့ လုပ်ငန်းကြောင့်ပြည်သူလည်းပျော်၊ အစိုးရလည်း ပျော်၊ ဟိုနှမ –ိုး တရုတ်လည်းပျော်။ အကုန်လုံးပျော်နိုင်တယ်။
ဒါ့ကြောင့် စီမံကိန်းကို ရပ်မယ်ဆိုရင် အားလုံးအတွက် အကျိူးမရှိဘူး။
ဘလော့ထဲမလဲ ဟောဒါလေးတွေ့သဗျို့ …
ဒီစာတွေ လူတွေကြား များများ ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိစေချင်ပါတယ်…
ဘာကိုတောင်းရမှာလဲ ဘာကိုမတောင်းရမှာလဲ သိကြရအောင်ပါ…
ဘလော့ လိပ်စာလည်း အောက်ဆုံးမှာ ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျို့…
လောကမှာ အကောင်းနဲ့ အဆိုး၊ အပြုနဲ့ အဖျက်က တွန့် တွဲနေတာ သဘာဝဆိုပေမဲ့….ဆိုးနေတဲ့ကိစ္စတွေကို အကောင်းဖြစ်အောင်ပြုပြင်လို့ လွယ်ပါတယ်။ အဖျက်သမားကို အပြုသမားဖြစ်အောင် တည်ဆောက်ဖို့ မခဲယဉ်ပါဘူး။
သူတို့ လိုပဲ….ကျူးကျော်ရပ်ကွက်ကနေ ဖယ်ပေးရတဲ့လူတွေ…လယ်မြေတွေအသိမ်းခံရတဲ့လူတွေရဲ့ မျက်ရည်တွေဟာလည်း ဘ၀နဲ့ ရင်းပြီး ကျတဲ့မျက်ရည်တွေပါ။ ဒါတွေကို အစိုးရကော အတိုက်အခံကော ၈၈-လို့ ခေါ်တဲ့လူတွေပါ အားလုံး ရင်နဲ့ ခံစာပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချစေချင်တယ်။